Screen Time for Children During Homebased Learning – A View from Yangon American International School | Myanmar Business Today
HomeBusinessScreen Time for Children During Homebased Learning – A View from Yangon...
Screen Time for Children During Homebased Learning – A View from Yangon American International School
Even before COVID-19, there wasasignificant focus on the overuse of technology with children and the concerns surrounding too much screen time. Many parents found themselves negotiating the amount of time their children spent onascreen, which causedastrain on family relationships as arguments and tantrums often followed. Now with home-based, online learning being the “new normal”, families are adjusting to the current situation along with the previously recommended screen time limits being thrown out the window.
When the global pandemic hit Myanmar and Yangon American International School was forced to move to an online learning model, teachers and parents immediately recognized the need forashift in the approach to using technology.
Teachers had to quickly pivot to giving fully online instruction, using video calls asaway to teach and interact with their classes. Yangon American started usinganumber of apps and websites to support student learning and ensure that essential content was still being covered. Students moved from having technology integrated as one tool throughout the day to it being the single most essential piece of equipment for their learning. Video calls, educational videos, and digital assignments suddenly filled their days, causingahuge spike in screen time and technology fatigue.
“Screen time will be unavoidable during COVID19 times, so better it be guided and supported by teachers with the goal to enhance student learning. It is also important to use it asatime to have them socialize and get to know each other to create and foster meaningful relationships within our school community. Longer screen time is not ideal, but when managed inaconstructive and positive way we can use it to help our children’s learning and development” Phyllis Lopez, Grade 1 Teacher.
Following the inquiry-based IB PYP curriculum, Yangon American teachers have taken to discussing the situation directly with their students. Facilitating inquiry in online learning often limits collaboration opportunities for students, which areasignificant component of problem-solving and creative thinking. Teachers have started implementing wonder or question walls, where students have the opportunity to document their ideas while interacting with teachers and peers in asking and answering questions. Through discussions and sharing information, students have started to realize that they needed some time away from their screens outside of school hours.
“Our daughter, Akshita, has recently joined Yangon American in Grade I. She was alreadyalittle apprehensive about joininganew school and then we learnt that schools cannot reopen owing to C-19. However, once the online classes started, we were all very pleasantly surprised. Akshita loves her school and has managed to make some friends in the class, all thanks to the efforts of her teacher, Ms. Phyllis Lopez. As parents, we are extremely happy with how the school has planned and implemented the online classes. The teachers are always online, very supportive, and have managed to createavery warm and friendly atmosphere, which is conducive to learning. It is as good as any online school for 6-years olds could be; in fact, much better than we had even hoped for!!! We are very excited to beapart of the Yangon American family” comments Anurag Sharma.
Yangon American continues to communicate and collaborate with students and families to findaworkable balance between on and off-screen activities to support learning. Students are asked to take regular breaks throughout the school day, whether it is to help with chores around the house, play with their siblings, or just move their bodies. Parents and families are also encouraged to enjoy screen-free time together after the school day, reading, going forawalk, or just havingadiscussion free from devices.
“Now more than ever, teachers need to reinforce students’ resilience and flexibility. Fortunately, at Yangon American, we have found creative ways of transitioning to online learning. As an Arts and Technology teacher, I have found that these two subjects complement each other perfectly when it comes to remote learning. We are lucky we live inatime when technology offers so many possibilities! Designing lessons for remote learning isachallenge, undoubtedly, but the sight of students engaged and participating from afar, isadelightful reward. There is, of course, no substitute for in-person-learning, but let us for the time being remain positive and embrace the opportunities that online learning presents to us all” Mrs. Mariana de Heredia, Media Specialist, Art, and IT Teacher.
Focus on educational online resources helps to make the heightened level of screen time more positive and allow students some control over how and when they learn. As the future of education continues to change, teachers at Yangon American will work to balance technology and off-screen learning and are ready to adapt to whatever else might come our way.
COVID-19 ကပ်ရောဂါ မဖြစ်ပွားမီကပင် ကလေးသူငယ်များ နည်းပညာကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကဲ့သို့သော စကရင်ဖန်သားပြင်တို့ကို အသုံးပြုချိန်များလွန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိဘများ၏ အာရုံစိုက်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မိဘများက မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်များ စကရင်သုံးစွဲချိန် လျှော့ချရန် ညှိနှိုင်းရင်း ကတောက်ကဆဖြစ်ရ၊ အချေအတင်ဖြစ်ရကာ မိဘနှင့်သားသမီးကြား ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်လာသည်များလည်း မြင်ရကြုံရဖူး မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုကြုံတွေ့နေရသော ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နေအိမ်မှ သင်ယူရသော အွန်လိုင်း သင်ကြားရေးစနစ်သည် New Normal စံပုံစံအသစ် ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ မိသားစုများသည်လည်း ပြောင်းလဲလာသည့် အခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကြိုးစားနေကြရကာ ယခင်က စကရင်သုံးစွဲချိန် မည်မျှသာရှိသင့်သည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်များ ကိုလည်း ပယ်ဖျက်ရတော့မည့် အလား ဖြစ် နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီး ရိုက်ခတ်လာသည့်အချိန်၌ နည်းပညာကိုအခြေခံသော သင်ကြားရေးပုံစံကို ပြောင်းလဲချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း Yangon American International School မှ ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားမိဘများက အလိုအလျောက် နားလည်ခဲ့ကြသည်နှင့်အညီ အွန်လိုင်း သင်ကြားမှု ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
ဆရာများအနေဖြင့် သင်ခန်းစာများကို အွန်လိုင်းမှ အပြည့်အဝပို့ချနိုင်ရေးအတွက် ပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ စာသင်ကြားရေး၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရေးတို့အတွက် ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများနှင့် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် Yangon American ကျောင်းတော်ကြီးမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ သင်ကြားရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်နှင့် အဓိက သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာများကို ပို့ချနိုင်စေရေးအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုး၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်အမျိုးမျိုးတို့ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နည်းပညာသည် ကျောင်းသားများအတွက် သင်ခန်းစာအထောက်အကူပြု ကိရိယာတစ်ခု သက်သက်အဖြစ်မှ မရှိမဖြစ်နည်းလမ်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့်အတူ ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ တစ်နေ့တာတွင် ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ခြင်း များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သုံး အိမ်စာများဖြင့် ပြည့်နှက်လာကာ စကရင်အသုံးပြုချိန်များ လွန်စွာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး နည်းပညာအသုံးပြုလွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသော နွမ်းနယ်မှုများ ကြုံတွေ့လာရပါသည်။
Grade 1 ကိုသင်ကြားပြသနေသည့် ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သူ Ms. Phyllis Lopez က “COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလမှာတော့ ကျောင်းသားတွေဟာ စကရင်ဖန်သားပြင်တွေနဲ့ မလွှဲမရှောင်သာ ထိတွေ့နေရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဆရာဆရာမတွေရဲ့ လမ်းညွှန်ပြသမှု၊ ပံ့ပိုးမှုတွေရှိနေဖို့လိုအပ်သလို နည်းပညာအသုံးပြုရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ကျောင်းသားတွေရဲ့ သင်ယူမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းမိသားစုအတွင်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ရင်းနှီးနွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိနေစေဖို့ ကျောင်းသားတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီး တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် သိနားလည်နိုင်အောင် နည်းပညာကို အသုံးချနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကွန်ပျူတာစကရင်မှာပဲ အချိန်ကုန်နေရတာဟာ စံနမူနာထားသင့်တဲ့ အပြုအမူမဟုတ်ပေမယ့် အကျိုးရှိပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပုံစံဖြစ်အောင် စီမံနိုင်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ သင်ယူမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ” ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အမေးအဖြေအပေါ် အခြေခံ၍သင်ကြားသော IB PYP သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသုံးပြုထားသည့် ကျောင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ Yangon American မှ ဆရာဆရာမများသည် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုပြုခဲ့ကြပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အွန်လိုင်း သင်ကြားရေးစနစ်၌ အမေးအဖြေစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းက ကျောင်းသားများ၏ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်၊ တီထွင်ကြံဆတွေးခေါ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်တို့ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော ကျောင်းသားအချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ကန့်သတ်ထားသကဲ့သို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဤအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဆရာများက ‘Wonder’ (သို့မဟုတ်) ‘Question Walls’ ဟူသည့် စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဆရာဆရာမများနှင့် မိမိတို့အချင်းချင်းကြား အမေးအဖြေပြုလုပ်နေစဉ် တွေးတောမိသည့် အကြံဉာဏ်များကို ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ဆွေးနွေးချက်များ၊ အချက်အလက်ဝေမျှခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းချိန်ပြင်ပတွင် ကွန်ပျူတာစကရင်မှ ခွာရန် လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကျောင်းသားများ နားလည်လာခဲ့ကြပါသည်။
“ကျွန်တော့သမီး Akshita က Yangon American ရဲ့ Grade 1 မှာ မကြာသေးခင်က ကျောင်းစတက်ခဲ့တာပါ။ ကျောင်းအသစ်ကိုစတက်ရမှာဆိုတော့ သူကလည်း စိုးရိမ်နေတဲ့အချိန် COVID-19 ကြောင့် ကျောင်းတွေ ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းအတန်းတွေစဖွင့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် ကျေနပ်အားရ ခဲ့ပါတယ်။ သမီးရဲ့ အတန်းပိုင် Ms. Phyllis Lopez ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် အခုဆို Akshita က ကျောင်းတက်ရတာပျော်နေသလို အတန်းထဲမှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေ ရနေပါပြီ။ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် Yangon American က အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတွေကို စီစဉ်ပုံ၊ အကောင်အထည်ဖော်ပုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ အရမ်းအားရပါတယ်။ ဆရာတွေကလည်း အမြဲအွန်လိုင်းမှာ အသင့်ဖြစ်နေတယ်၊ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း သေချာပံ့ပိုးပေးတယ်၊ သင်ယူရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ နွေးထွေးပြီး ရင်းနှီးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးပေးထားနိုင်ပါတယ်။ (၆) နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူကလေးငယ်တစ်ယောက်အတွက်တော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးစနစ်ပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားတာ ထက်တောင် ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပါသေးတယ်။ Yangon American ကျောင်းမိသားစုဝင် ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်” ဟု ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးဖြစ်သူ Mr. Anurag Sharma က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Yangon American ကျောင်းတော်ကြီးအနေဖြင့် နည်းပညာအခြေခံ သင်ခန်းစာများ သာမက ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ ဟန်ချက်ညီစေရန် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ မိသားစုများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေလျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းတက်ရက် တစ်နေ့တာတွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် သင်ခန်းစာများကို ခေတ္တရပ်နား၍ အိမ်မှုကိစ္စများ ကူညီလုပ်ဆောင်ရန်၊ မောင်နှမများနှင့် ဆော့ကစားရန်၊ သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရန် အချိန်များ ပေးအပ်ထားပါသည်။ ကျောင်းသင်ခန်းစာများအပြီးတွင်လည်း မိဘများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့်အတူတကွ အချိန်ကုန်ဆုံး စေခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန် အားပေးထားပါသည်။
“ဒီအချိန်က ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်း၊ လိုက်လျောညီထွေ ပြုမူနိုင်စွမ်းကို အားဖြည့်ပေးဖို့ အလိုအပ်ဆုံးအချိန်ပါ။ ကံကောင်းတာကတော့ Yangon American ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ဆန်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲထားနိုင်တာပါ။ အနုပညာနဲ့ အိုင်တီဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ အဝေးရောက် သင်ကြားမှုစနစ်မှာ ကျွန်မသင်ကြားနေတဲ့ ဘာသာရပ်နှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အထောက်အကူပြု နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့ခေတ်မှာ ကျွန်မတို့နေနိုင်တာ သိပ်ကံကောင်းပါတယ်။ အဝေးရောက် သင်ကြားရေးစနစ်အတွက် သင်ခန်းစာတွေ ဖန်တီးရတာဟာ ခက်ခဲတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေ အာရုံစိုက်သင်ယူနေကြတာ၊ တစ်ယောက်တစ်နေရာစီက ပါဝင်နေနိုင်တာကို မြင်တွေ့နေရတာက ကျွန်မတို့ အတွက်တော့ အင်မတန်မှ ဝမ်းသာစရာပါ။ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံပြီး သင်ယူတဲ့စနစ်ကို ဘာနဲ့မှ အစားမထိုး နိုင်တာမှန်ပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးစနစ်ကပေးတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အရယူဖို့၊ အပြုသဘောနဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်” ဟု မီဒီယာအထူးပြု အနုပညာနှင့် အိုင်တီဘာသာရပ်ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သူ Mrs. Mariana de Heredia က ဆိုပါသည်။
စကရင်အသုံးပြုချိန် ပိုမိုတိုးမြင့်လာသော်လည်း ပညာရေးအထောက်အကူပြု အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး အရင်းအမြစ်များကို အဓိကထားခြင်းဖြင့် ဤအချိန်ကို ပို၍အကျိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်သလို ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ မည်သို့လေ့လာသင်ယူမည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် လေ့လာသင်ယူမည် စသည်တို့ကို မိမိတို့ဘာသာ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးကဏ္ဍ၏ အနာဂတ် ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ Yangon American ကျောင်းတော်ကြီးမှ ဆရာဆရာမ များအနေဖြင့် နည်းပညာ အသုံးပြုသင်ကြားရေးနှင့် ကွန်ပျူတာပြင်ပသင်ကြားရေးကို ဟန်ချက်ညီ စေရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သလို အပြောင်းအလဲနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် အသင့်အနေအထား ဖြင့် ရှိနေပါသည်။
Previous articleWill COVID-19 be the catalyst that kills foreign investment in Myanmar?
Next articleMyanmar and S.Korea Aim for More Economic Collaboration